ဂျပန်နိုင်ငံက ဇူလိုင်လတွင် “ကာကွယ်ဆေးပတ်စပို့” စတင်ထုတ်ပေးမည် - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံက ဇူလိုင်လတွင် “ကာကွယ်ဆေးပတ်စပို့” စတင်ထုတ်ပေးမည်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရေလှောင်ကန်ကြီးတွင် လှေသုံးစီး နစ်မြုပ်ပြီးနောက် လူ ၄ ဦးသေဆုံး ၊ ၁၇ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၃၁,၂၁၆,၃၃၇ ဦးအထိမြင့်တက်လာ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါခံစားရသော အုပ်စုများအား ပံ့ပိုးရန် e-voucher ကမ်ပိန်း သက်တမ်းတိုး
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက Delta မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရာတွင် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးက အလွန်အစွမ်းထိရောက်မှုရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရှိ တိုကျိုကျန်းမာရေးစင်တာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကမ်ပိန်းတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Behrouz Mehri/Pool via Xinhua)
တိုကျို၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံက ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှစ၍ “ကာကွယ်ဆေး ပတ်စပို့” စတင်ထုတ်ပေးရေး မြူနီစီပယ်ဒေသများအား ခွင့်ပြုရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ထိပ်တန်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက “နှောင့်နှေးခြင်းမရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး” အထောက်အထားများအား ကိုးကား၍ ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“နှောင့်နှေးခြင်းမရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ပြင်ဆင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ပုံစံနဲ့လည်း ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လည်း စဉ်းစားသွားမှာပါ” ဟု အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကာဆူနိုဘူ ကာတိုက ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် နီးစပ်သူ သတင်းရင်းမြစ်များအဆိုအရ နိုဗယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်း အထောက်အထားများရှိသူများအနေဖြင့် ပြင်ပ၌ လှုပ်ရှားမှုများစွာ လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်း၏နိုင်ငံသားများအား ခရီးသွားလာသည့်အခါ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိစေရန် သို့မဟုတ် ကွာရန်တင်း (quarantine) နေထိုင်ရမည့်ကာလ တိုတောင်းစေရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသည့်အဆင့် အတည်ပြုထားသော အချက်အလက်များ ယူဆောင်သွားကြရန် လိုလားကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောခဲ့သည်။
ယင်းအထောက်အထားကို အခြားသောနိုင်ငံများကလည်း လိုက်နာကြရန် ပြောကြားထားကြောင်း ၎င်းတို့က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကလည်း ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူ ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း မြင့်တက်လာရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ပတ်စပို့များအား ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ထုတ်ပေးရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဒေသတွင်းမြူနီစီပယ်ဒေသများအားထုတ်ပေးမည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းမှတ်တမ်းများပေါ် အခြေခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံမှန် ပတ်စပို့ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်လည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေး ပတ်စပို့များတွင် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူကို ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သလို အချက်အလက်များကိုလည်း ဂျပန်ဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာများဖြင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအား အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားသူများအတွက် ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းများဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန် ရုပ်သံလွှင့်ဌာန NHK က ဆိုသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကာကွယ်ဆေး ပတ်စပို့လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် ဒေသခံအစိုးရရုံးများ၌ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
TOKYO, June 17 (Xinhua) — Japan plans to allow municipalities to begin issuing “vaccine passports” from mid-July, with its top government spokesperson on Thursday referencing the documents’ “prompt issuance.”
“To prepare for prompt issuance, we will first issue the vaccination certificates by paper but will also make consideration for their issuance in the digital format,” Chief Cabinet Secretary Katsunobu Kato toldaregular press conference.
According to sources familiar with the matter, more activities are becoming available overseas to people who have documents certifying they have been vaccinated against the novel coronavirus.
The Japanese government wants its citizens carrying the documents verifying their vaccination status to be exempted or only have to undergoashortened quarantine period when they travel, the sources said. The government here has been asking other countries to comply with this, they added.
Some business circles here are calling for the passports to be issued as soon as possible on hopes for increased overseas travel in twine with overseas economies reopening.
The certificates, to be issued by local municipalities in Japan, will be free of charge and based on the government’s vaccination records. They will be available to regular passport holders.
The vaccine passports will also show the vaccine manufacturer, with the information written in Japanese and English.
The government has said it may also issue digital versions of the certificates that can be applied for online, Japan’s public broadcaster NHK said.
In the meantime, applications for the vaccination passports will have to be made in person at local government offices. Enditem
Photo: A medical worker receivesadose of the COVID-19 vaccine as the country launches its inoculation campaign at the Tokyo Medical Center in Tokyo, Japan, Feb. 17, 2021. (Behrouz Mehri/Pool via Xinhua)
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ရှိ ဒေသခံ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်၍ ကျွန်းကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသော ဆင်အုပ်စု အနောက်တောင်ဘက်ရှိမြို့တွင် တရစ်ဝဲဝဲနေလျက်ရှိ